Murashaxa Madaxweynaha Barcelona ee Eimili Rousaud oo la sheegayo in loo badinayo inuu ku guuleysan doono doorashada ayaa shaaciyey inuu qaban doono afti uu magaca kaga beddelayo garoonka Camp Nou ee kooxdiisa haddii la doorto bisha January.
Rousaud ayaa ololihiisa doorashada waxa uu ku daray ballanqaad ah inuu Lionel Messi kusii hayn doono kooxda oo aanu ka tegi doonin, isagoo u samaynaya arrimo qancin doona sida inuu garoonka Camp Nou magaca ka beddelo oo uu u bixiyo Stadio Lionel Messi.
Waxa kale oo uu ballan-qaaday inuu dib usoo celin doono xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr oo sannadkii 2017kii uga wareegay PSG oo ka bixisay lacag dhan 222 milyan oo Euro.
Emili Rousaud oo dardar ku wada ololihiisa doorasho, waxa kale oo uu miiska soo saaray xiddig kale oo aan magaciisa la shaacinin oo uu keeni doono Barcelona.
Kooxda reer Spain oo xili ciyaareedkan dhibaato ku dhex jirta ayaa fadhida kaalinta 13aad ee miiska kala-sarraynta waxaanay 12 dhibcood ka dambaysaa kooxda hoggaanka horyaalka haysa ee Real Sociedad.
Tababare Ronald Koeman ayaa illaa hadda awoodi la’ inuu helo khiddadii guusha iyo inuu Lionel Messi ku qanciyo inuu ogolaado heshiis cusub oo uu saxeexo, xilli uu hore usii sheegay inuu tegi doono dhamaadka xili ciyaareedka.
Emili Rousaud oo hadlayay ayaa yidhi: “Waxaan qaban doonaa afti magaca lagaga beddelayo Camp Nou oo laga dhigayo Leo Messi. Waxa kale oo aan keeni doonaa laba ciyaartoy oo midkood yahay Neymar.”
5 healthiest habits in people who find themselves not growing older